नेपाली स्टार किड्सको स्टार भ्यालु : को सफल, को असफल? :: PahiloPost
नेपाली स्टार किड्सको स्टार भ्यालु : को सफल, को असफल?
11th June 2019, 05:19 pm | २८ जेठ २०७६
हलिउड देखि बलिउडसम्म हेर्न हो भने अधिकांश स्टार किड्सहरु आफ्नो अग्रजको पदचाप पच्छयाउँदै फिल्मलाई नै आफ्नो पेसा बनाइरहेका छन्। तर अधिकांश बाहेक एकाध मात्र सफलताको स्वाद चाख्न सफल भएका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय नेपाली सिनेमा जगतका कलाकारहरूका छोराछोरी पनि आफ्ना आमा बाबुको पदलाई पच्छ्याउँदै आएको छन्। तर, उनीहरूले आफ्ना आमा बुवाको बिँडो थाम्न सक्छन् र? भन्ने प्रश्नमै अहिले हामी रोकिनुपरेको छ। किनभने यी तमाम स्टार किड्स आफ्ना अग्रज भन्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको पाइँदैन। अनमोललाई अपवाद मान्ने हो भने सबैजसो स्टार किड्स अहिले अभ्यासकै चरणमा छन्। झरना थापाको छोरी सुहाना थापालाई पनि केही हदसम्म सफल नै मान्न सकिन्छ।
नायक अनमोल केसी सदाबहार नायक तथा निर्देशक भुवन केसीको पदचाप पछयाउँदै २०१३ मा फिल्म ‘होस्टेल’ मार्फत नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरे। अनमोल युवायुवती माझ निकै लोकप्रिय छन्। अनमोलले जेरी, कृ, क्याप्टेन, ए मेरो हजुर ३ लगायतका फिल्महरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। भुवन केसीले २०१६ मा छोरा अनमोललाई लिएर ‘ड्रिम्स’ निर्देशन गरे।
आफ्नै होम प्रोडक्सनमा बनेको फिल्म ‘ड्रिम्स’ मा अनमोलले नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग एउटै स्क्रिन शेयर गरेका थिए। यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरेको थियो। त्यस्तै अनमोल केसी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ ले पनि बक्स अफिसमा व्यापारिक रूपमा सफल भयो। जसमा अनमोल र सुहानाले एउटै स्क्रिन शेयर गरेका छन्।
नायिका केकी अधिकारी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सफल नायिकाको रूपमा परिचित छिन्। उनी फिल्म निर्देशक तथा रंगकर्मी बद्री अधिकारीकी छोरी हुन्। केकीले फिल्म ‘स्वर’ बाट डेब्यु गरेकी हुन्। जसमा उनले राजबल्ल्भ कोइरालासँग स्क्रिन शेयर गरेकी छिन्।
केकीले फिल्ममा मात्र नभएर थुप्रै म्युजिक भिडियो तथा विज्ञापनहरूमा समेत काम गरेकी छिन्। केकीले मेरो वेस्ट फ्रेन्ड, बितेका पल, महसुस, घामपानी, फन्को, नाई नभन्नु ल ५, हाउ फन्नी, कोहलपुर एक्सप्रेस, ऐश्वर्य लगायतका फिल्महरूमा अभिनय गरेकी छिन्। फिल्म र म्युजिक भिडियो हुँदै पछिल्लो समय केकीले फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ निर्माण गरेकी थिइन्।
उनका चलचित्रहरूको चर्चा र उनको अभिनयको चर्चा जति हुन्छ तर, चलचित्र भने त्यति सफलताको सिँढी उक्लन सकेका छैनन्। अध्याधिक चर्चमा रहेको कोहलपुर एक्सप्रेस फ्लप साबित भयो। उनी चलचित्रमा भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा सफल साबित भएकी छन्।
सम्भवतः नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो दुर्लभ संयोग मान्नुपर्छ, आमाले जुन चलचित्रबाट चर्चा कमाइन् त्यसैको सिक्वेल फिल्मबाट छोरीको डेब्यु। यो संयोग जुर्‍यो नायिका सुहाना थापाको हकमा। उनकी आमा नायिका तथा निर्देशक झरना थापाले फिल्म ‘ए मेरो हजुर’ बाट नै चर्चामा आएकी थिइन्।
‘ए मेरो हजुर’ मा झरनाको अपोजिटमा थिए नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। झरनाले आफूले नै निर्देशन गरेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ मार्फत छोरी सुहाना थापालाई पनि रजतपटमा डेब्यु गराइन्। सुहानाले पहिलो फिल्मबाट नै निकै चर्चा बटुलिन्। अहिले सुहानाको फ्यान फलोइङ पनि बाक्लै छन्। उक्त फिल्ममा सुहाना र अनमोलको जोडी दर्शकहरूले रुचाएसँग उनीहरू आगामी चलचित्रमा पनि एकसाथ देखिनुपर्ने डिमाण्ड बढ्न थालेको छ।
नायक सलोन बस्नेत अफर आए जति अधिकांश फिल्महरूमा काम गर्दछन्। त्यसैले चुजि बन्न नसक्दा उनी हरेक फिल्ममा साइड रोलमा नै चित्त बुझाउने गर्दछन्। कलाकार, निर्देशक तथा निर्माता सोभित बस्नेतको छोरा सलोनले सानै उमेरमा बाल कलाकारको रूपमा फिल्म ‘नेपाली बाबु’ मा अभिनय गरेका थिए।
ठुलो भएपछि भने उनले फिल्म ‘होस्टेल’ मा अभिनय गरे। उनले होस्टेल, गाजलु, एउटा साथी, ए मेरो हजुर २, ए मेरो हजुर ३ लगायतका फिल्महरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। उनले केही समय अघि आफ्नै होम प्रोडक्सनमा निर्माण भएको फिल्म ‘बाबु कान्छा’ मा लिड रोलमा अभिनय गरे तर त्यो फिल्म सुपर फ्लप भयो।
उनी सपोर्टिङ क्यारेक्टरमा रहेका फिल्महरू भने सफल भएका छन्। तर उनको चर्चा भने दर्शकमाझ कम हुने गरेको छ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा सलोनको अभिनयको तारिफ हुने गरेता पनि उनी लिड रोलमा भन्दा पनि सपोर्टिङ रोलमै बढी जमेका छन्।
नारायण पुरी फिल्मी वृत्तमा एक सफल निर्देशकको रूपमा चिनिन्छन्। उनकै पदचाप पछ्याउँदै उनका छोरा संयम पुरीले फिल्म ‘सायद’ मार्फत फिल्मी करियर सुरु गरे। नारायणले फिल्म आगो, ए मेरो हजुर लगायतका थुप्रै फिल्महरू निर्देशन गरेका छन्।
नारायण पुरी निर्देशित फिल्म ‘आगो’ मा संयमले बालकलाकरको रूपमा अभिनय गरेका थिए। तर संयमले ‘आभास’ मार्फत चर्चा बटुलेका थिए। उनले लभ सब, ग्याङस्टार ब्लुज, सायद, नाई नभन्नु ल ३, आफ्नो मन, आगो, अल्पविराम, मेरो हजुर लगायतका थुप्रै फिल्महरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। उनका चलचित्रहरू केही सफल र केही असफल भए। उनको चर्चा मध्यम खालको देखिन्छ।
वरिष्ठ कलाकार टीका पहारीका छोरा गौरव पहारी पछिल्लो समय चर्चामा छन्। फिल्म ‘मञ्जरी’ बाट रजतपटमा प्रवेश गरेका गौरव हेमन्त रानाले गाएको गीत ‘सुन साइली’ बाट थप चर्चामा आएका थिए। गौरवले फिल्म होस्टेल, गाजलु, उत्सव लगायतका फिल्महरूमा काम गरिसकेका छन्।
पछिल्लो समय उनी दर्शक माझ साइँला उपनामले परिचित छन्। गौरव अभिनीत म्युजिक भिडियो ‘सुन साइली’ हिट भएसँगै केही समय अघि उनलाई र साइली अर्थात् मेनुका प्रधानलाई लिएर ‘साइली’ नामक फिल्म बनाइएको थियो। यो फिल्मले दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको थियो। उनको चर्चा चलचित्रबाट भन्दा पनि 'सुन साइली'बाट नै बढी भएको छ। उनी पनि चलचित्रमा लिड रोलमा भन्दा पनि सपोर्टिङ रोलमा बढी सफल भएका छन्।
कुनै समयका चल्तीका पुराना नायक शिव श्रेष्ठका छोरा हुन् शक्ति श्रेष्ठ। उनले पनि बाबु शिव श्रेष्ठकै पाइला पछयाउदै नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरे तर शिव श्रेष्ठले जस्तो नेम र फेम भने कमाउन सकेनन्। शक्तिले आफ्नै होम प्रोडक्सनमा निर्माण भएको फिल्म ‘यस्तो एउटा प्रेम कहानी’ मार्फत डेब्यु गरेका थिए। तर उनले बाबु शिव श्रेष्ठको जस्तो प्रभाव नेपाली फिल्म उद्योगमा पार्न सकेनन्।
त्यस्तै सदाबहार नायिका करिष्मा मानन्धरकी छोरी कविता मानन्धरले पनि फिल्म ‘यस्तो एउटा कहानी’ बाट नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पाइला राखेकी हुन्। यस फिल्ममा शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति मानन्धर र कविता मानन्धरले एकसाथ डेब्यु गरेका थिए। तर, सफलता भने हात लागेन।
नेपाली स्टार किड्सको स्टार भ्यालु : को सफल, को असफल? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।